[Inkscape] Fampidirana ny Inkscape | Avy amin'ny Linux
helena_ryuu | | fampiharana, famolavolana, GNU / Linux, soso-kevitra, Tutorials / Manuals / Tips
Tany am-boalohany dia nanana drafitra hamoronana fampianarana vitsivitsy momba ny fiasa sy tetika azonay ampiasaina ao amin'ny Inkscape izahay, saingy nony afaka kelikely dia hitako fa tsara kokoa ny mamorona andian-dahatsoratra momba ny fikirakirana fototra sy ny kalitaony.
Mampatahotra ny mahatsapa ny antontan-taratasy kely amin'ny teny espaniola misy, ary tsy misy (tafiditra ato amiko) ny fahalalana ny fampiasana ireo programa ireo, ary mety hahasoa ho an'izay te hiditra amin'ny tontolon'ny famoronana nomerika miaraka amin'ny teknolojia Open Source . Ka amin'ny alàlan'ny «mini-manual» ary ny ankamaroan'ny lahatsoratra azo ampiharina (satria tsy tianay ny mianatra teoria ~ _ ~) andao handinika lalina kokoa ny fampiasana an'ity rindrambaiko famolavolana mahafinaritra ity.
Momba ny Inkscape
tsara ny manomboka izany dia tokony hanao fampidirana fototra ianao (fomban'ny mpampianatra amin'ny ambaratonga voalohany) amin'ny inona izany Inkscape.
araka ny voalazany ao amin'ny tranokalany:
Inkscape dia mpamoaka sary sary mivelatra amin'ny loharano misokatra, miaraka amin'ny fahaiza-manao mitovy amin'ny Illustrator, Freehand, CorelDraw na Xara X, amin'ny fampiasana ny fenitry ny W3C: ny endrika fisie Scalable Vector Graphics (SVG). Ny endri-javatra tohanan'ny dia misy: endrika, kapoka, soratra, marika, klone, fifangaroan'ny fantsona alpha, fanovana, gradien, lamina ary vondrona. Inkscape dia manohana meta-data ihany koa Creative Commons, fanitsiana node, sosona, fiasan-tsokosoko sarotra, fanaingoana sary rakitra, lahatsoratra amin'ny kapoka, fampifanarahana lahatsoratra, fanovana XML mivantana, ary maro hafa. Izy io dia afaka manafatra endrika toa ny Lahatsoratra, EPS, JPEG, PNG, ary TIFF ary manondrana PNG ary koa endrika miorina amin'ny vector maro.
Amin'ny ankapobeny dia mpamoaka lahatsoratra an'ny sary sary multiplatform, miaraka amina karazana asa maro izay mahatonga ny Inkscape ho fitaovana matanjaka sy izany rehetra izany eo ambanin'ny fahazoan-dàlana GPL.
Raha vantany vao vita ny fampisehoana nataonao, dia ho fantatsika ny ifotony ny interface, mba hitantanana tsara kokoa ny tenantsika amin'ireto lahatsoratra manaraka ireto.
Ireto misy singa manaraka ireto ny interface default.
Fitsipika, torolàlana ary toro-marika
Bara fisoratana anarana
Faritra asa (na dia tsy manam-petra aza ny habaka)
Azo atao koa ny manampy na manala bara araka izay itiavantsika azy, afaka manova masontsivana maromaro momba an'io isika File> Safidio Inkscape> Interfaz.
Menu ary Command Bar
Inkscape toy ny rindranasa maro GTK, dia manana menu tsy misy fangarony miaraka amin'ireo fiasa tena ilaina toa ny archive, amboary, sns… Misy koa ny menus mifandraika amin'ny famolavolana sy ny fanaovana sary.
Ny bara komandy dia ilay hita eo ambanin'ny menus. Ahitana hitsin-dàlana amin'ny baiko iraisana izay azontsika atao raha tsy miaraka amin'ny fanalahidy mifangaro, misy ny fanaraha-maso hanodinkodinana ireo antontan-taratasy sy zavatra ao amin'ilay sary. baiko mahazatra toy ny sokafy, vonjeo, vaovao, foanana, avereno indray ary ny hafa dia eto.
Ity fizarana ity dia misy laharam-pahamehana ho an'ny fanaovana ny sary. Fitaovana fanaovana sary hoso-doko sy fanodikodinana endrika sy zavatra toa tsy dia fahita firy, saingy zavatra mahatalanjona no azo tanterahina amin'ireo fitaovana tsotra ireo. Ireto ireto fitaovana ireto sy ny asany:
Io bara io dia manova ny atiny arakaraka ny fitaovana, mampiseho safidy isan-karazany mifandraika amin'ilay nolazaina fa ilaina sy ny fahafaha-manodinkodina azo atao amin'ny zavatra iray.
Io no faritra isehoan'ny hetsika rehetra. Ao dia misy takelaka habe A4 ary aiza no amoronan'ny mpampiasa, ka io no faritra manan-danja indrindra amin'ny interface. Mariho fa ny "pejy" dia fikasana hanaratsy endrika faritra iray hanondranana na hanonta; ireo sisin-tany ireo dia tsy mametra velively ny sary SVG izay andehanantsika. azontsika atao ny manamboatra ny haben'ny pejy (na mamafa ny pejy aza) File> fananana rakitra.
Izy ireo dia fizarana diplaoma amin'ny tapany ambony sy havia amin'ny faritra iasana, nalamina mba handrefesana ny faritra avo sy mitsivalana, ny refy fandrefesana dia azo faritana ao File> fananana antontan-taratasy ao amin'ny tab pejy, azontsika atao koa ny mamaritra ny haben'ny pejy sy ny hafa.
Izy ireo dia torolàlana "magnetika" nofaritan'ny mpampiasa azy, izay azo foronina mora foana amin'ny fipihana eo amin'ny mpanapaka ary hisintona ny toerana tiana. Mba hanesorana ny tondrozotra dia "averintsika" tsotra fotsiny izy amin'ny fisarihana azy mankany amin'ny mpitondra.
Mety hanampy ny tsipika fitarihana, fa raha mila be dia be izy ireo dia ilaina kokoa ny mampiasa ny kiran-jotra. Azontsika atao ny mampihetsika azy amin'ny alàlan'ny fanindriana ny # (Shift + 3 na AltGr + 3 amin'ny ankapobeny) na amin'ny menio Hijery> Grid. Misy karazana grids 2:
dia ny kofehy iraisan'ny tsipika mitsivalana sy mitsangana
Ity karazana ity dia mamela ny mpampiasa hamaritra ny zoro tsipika, izay mety hahaliana ny sary teknika sy / na ny maritrano. Azontsika atao ny mamaritra ny zoro ao File> fananana rakitra, ao amin'ny takelaka fitoeran'entana.
Izy io dia mirakitra toerana samihafa ho an'ny zavatra sy sary, indrindra ilaina rehefa mampiasa ilay fitaovana hanovana ny tadin'ny lalana na ny fehin-tànana mifehy.
no fomba haingana indrindra ametrahana loko amin'ny endrika sy zavatra. Eo amin'ny farany ambany amin'ny varavarankely no misy azy ary afaka misafidy ny loko irina miaraka amin'ireo fitaovana isika Fenoy, kapoka Freehand, borosySns ...
dia ny bara izay miseho eo ambanin'ny varavarankely ary misy fampahalalana isan-karazany toy ny:
mari-pamantarana loko zavatra
ary ny factor zoom
Ary noho izany ity fampidirana kely amin'ny Inkscape ity dia mifarana, miaraka amin'izany isika dia efa manana sary ifotony ny fomba fananganana ny interface, ary amin'ny fizarana manaraka dia hampiasa ireo fitaovana ireo amin'ny fomba azo ampiharina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » [Inkscape] Fampidirana ny Inkscape
Aiza no ahazoako serial? sa keygen?
emmm ity no linux fa tsy misy keygens na serial.
hehe, valiny tena tsara
Heveriko fa sangisangy no ilazanao azy 😛
mazava ho azy fa mananihany aho, efa manana ny DLL xD aho
Tsy omeko anao ny keygen satria tsy hitako io, fa avelako ho anao hanamaivanana ny nostalgia ...
Salama Helena_ryuu ary hiala tsiny ianao amin'ny fiantsoako anao ho anaram-bosotra fa tiako ny misaotra betsaka anao noho ity fampidirana tsara ny Inskcape, endrika sary madio maimaim-poana, manantena aho fa hanohy hamoaka zavatra maro hafa ianao hahafahako mamoaka ny farany fototra na ilay mpanao sary. Misaotra anao.
mahamenatra INKSCAPE hahaha manoratra haingana.
Tsy mandratra mihitsy ny tutorials, mianatra zavatra foana ianao. Manentana anao aho hanohy izany.
SaPpHiRe_GD dia hoy izy:
Mpanoro namana tsara 😉
Valio amin'i SaPpHiRe_GD
Toy ny mahazatra, tehaka sy ova, efa nilaina ny fampianarana anao momba ny famolavolana 😀
Fisaorana tsy manam-petra. Sambany aho vao nampiasa inkscape ary nanampy ahy ny lahatsoratrao. Tsara. 🙂
Asa Muito bom. Hiaraka aminao aho hianarako bebe kokoa momba ny Inkscape.
Tutorial tsara izany !! Mila manao lohahevitra fotsiny ho an'ny mpampianatra aho izay misy sary madio ary ho tonga mora raisina.
Fampidirana tena tsara amin'ny Inkscape. Na dia efa nampiasa an'ity fampiharana ity nandritra ny taona maro aza aho dia mbola gaga ihany aho potential
Tsara! .. .. ohatra iray azonao zaraina ?? ..
Heveriko fa ny sisa tavela amin'i Mcder dia ohatra RAW, izay hamerenanao ny lohahevitry ny plasma, na ny rindrina nataony. Zahao fotsiny i Hellium ary heveriko fa ho hitanao izany 😛
helena_ryuu .. .. misaotra anao nandany fotoana sy ny faniriana te hiala sasatra eo imason'ny tsy fisian'ny firafitry ny sary amin'ny lafiny rehetra .. xD
Lavitra miaraka amin'ny inkscape aho, noho ny zava-misy fa tsy manonta ny asako vita amin'ity rindrambaiko famolavolana vector ity.
Inona no tsy natao pirinty?
Fampahalalana tena tsara.
Na dia tsy maintsy mampiasa CorelDraw amin'ny asako aza aho, indraindray dia manao asa kely any Inkscape, toy ny ampahany amin'ny kanopy 18 metatra mirehitra, ankoatry ny zavatra hafa.
Marina fa tsy dia misy info firy amin'ny teny espaniola, noho izany dia mitombo avo roa heny ny ezaka ataonao.
Omaly dia adinoko ny naneho hevitra fa ho an'ireo liana amin'ny fampiasana an'ity fitaovana sarotra ity Joaclint Istgud (joaclintistgud.wordpress.com) dia namoaka boky misy pejy mihoatra ny 150 izay angoniny amin'ny antsipiriany ireo dingana tokony hatao hanatanterahana logo maro fantatra amin'ny tontolon'ny famolavolana Sary.
Tena soso-kevitra ary tena takatry ny volan'ny fahaiza-manao rehetra.
codealb, ity tsara ity dia hojereko, misaotra betsaka anao nanampy an'ity karazana fitaovana ity, ataon'izy ireo mahafinaritra kokoa ny fiainana ny bilaogy (^ - ^)
Tongasoa anao helena, misaotra anao tamin'ny lahatsoratra.
Nolazaiko anao hehe… Nolazaiko anao Helena, maro no tia an'ity karazana lahatsoratra ity, be dia be ny mpamorona fahakiviana eto amintsika HAHAHAHA.
Tutorial tsara, lahatsoratra tsara (toy ny mahazatra) 😉
Miandry ny tapany faha-2 aho he
"Mpamorona sosotra" xD comment flamer !!
Manao tranonkala sy fampandrosoana finday aho, saingy te hianatra bebe kokoa momba ny famolavolana mba tsy hiankina amin'ny antoko fahatelo amin'ny tetikasako manokana.
Mampiasa Gimp, Inkscape, Scribus ary LibreOffice aho ka vatosoa ireto lahatsoratra ireto, miandry ny ampahany faharoa sy ny fahatelo aho ...
Tsara. Amin'izany no ahafahako manararaotra an'ity rindranasa ity izay napetrako tao Chakra efa ela. Misaotra betsaka!!!
Tena hanompo ahy be dia be izany satria kely amin'ny Inkscape aho ary tiako ny mahazo ny ranom-boankazo rehetra ary misaotra betsaka anao! 🙂
moanina dia hoy izy:
Merci, ho an'ny lesona. Andao hojerentsika raha mampakatra zavatra bebe kokoa ianao.
Mamaly an'i moanina
Daniel Bertúa dia hoy izy:
Misaotra betsaka anao amin'ny lesona.
Miara-miarahaba anao aho ary mamporisika anao hanohy hihalalina.
Manana press mini aho izay ampiasaiko MAFY Rindrambaiko Maimaimpoana amin'ny Kubuntu Linux.
Ho an'ny fampiasana Design:
Tsy mihevitra ny tenako ho Mpamorona aho, mihevitra ny tenako ho Printer Diagrammer izay ankoatry ny zavatra maro hafa dia manao Design.
Tsy sahiko ny mametraka fampianarana, satria tsy manam-pahaizana amin'ireo programa ireo aho ary tena ilaina ny fampiasana omeko azy ireo.
Ny consultation teknika rehetra momba ny famokarana tena izy ho an'ny fanontana, hatramin'ny baiko.
Valiny tamin'i Daniel Bertúa
Salama namana malala, tonga toy ny nilatsaka avy tany an-danitra xD ianao, ahoana no ataonao mba hanontana amin'ny inkscape satria manonta ampahany fotsiny aminy fa tsy izy rehetra 🙁
Alefaso amin'ny PDF ary ho tonga lafatra ny fanontana.
Nanao pirinty fanaka noforoniko ho ahy aho nefa tsy nanana olana be.
O_O Malahelo, tsara .. Tsy very kalitao io ...
Salama indray MOL, sampy ianao, tena nandaitra izany, ankehitriny manana fanontaniana hafa aho (fialantsiny arivo raha manontany tena aho fa mampiseho fa fantatrao ny lohahevitra) Manana endrika noforonina tao amin'ny inkscape aho, izay torolàlana tokony harahiko ka azo atao pirinty ao amin'ny mpanonta izy io satria manana habe lehibe kokoa na amporisihinao.
Nanana olana tamin'ny Inkscape aho satria hita fa tsy mitovy amin'ny CorelDRAW sy Adobe Illustrator ny fampiasana ny fitaovany (ity farany no tiako indrindra satria ny fitaovana ampiasainy dia mazava ho azy raha ny fahitako azy) ary tsy afaka nahazatra an'ity mpamoaka lahatsoratra tsara ity aho. an'ny SVG.
Izaho dia nitady loharano mitovy amin'ny Illustrator loharano misokatra, nefa tsy nahita. Na eo aza izany, manantena aho fa hamotsotra an'i Freehand izy ireo ary avy eo hiasa amin'ny mitovy amin'ny Illustrator.
Galaxy Note 8: Galaxy Note izay naharitra ela vao nivoatra